Dhacdada Suuqgeynta Cadaabta - Tan oo madax ah, laakiin aan iib ahayn | Martech Zone
Muuqaalka Suuq-geynta Cadaab - Tan oo Leads, Laakiin Majiro Iibin
Isniin, Disembar 12, 2016 Jamil Velji
In kasta oo haysashada ilo xasilloon oo hoggaamin ah ay mar horeba wax weyn u tahay ganacsi kasta, ma keeni doonto cunto saxanka. Waad ka farxad badnaan doontaa haddii soo-celintaada iibku ay u dhigantaa warbixintaada cajiibka ah ee Google Analytics. Xaaladdan oo kale, ugu yaraan qayb ka mid ah hoggaamiyeyaashan waa in loo beddelaa iibka iyo macaamiisha. Ka waran haddii aad heleyso tan badan oo leedh ah, laakiin iibin la'aan? Maxaad si sax ah u qaban weyday, maxaadse sameyn kartaa si aad ugu celiso qafiska iibkaaga wadada saxda ah?
Haddii aad ku wareersan tahay xaaladdan oo kale, tallaabada ugu horreysa waa inaad si fiican u eegtaa websaydhkaaga iyo ololayaasha suuqgeynta. Waxaa suurtagal ah in labada midkoodna uusan sameynin wax ku filan oo u rogo martidaada iibsadayaal. Ololahaaga ma loo maamulayaa si hufan? Ka warran websaydhkaaga? Aynu eegno labada xaaladood ee kala ah;
Muuqaalka 1aad: Olole Si Liidata Loo Maareeyay
Si aad u ogaato in dhibaatadu ay noqon karto ololahaaga suuq-geynta, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo si fiican u baaraya. Haddii aad ku jirto olole Google Ads ah, tixgeli inaad si fiican u eegto warbixintaada weydiinta raadinta. Uma baahnid aqoon khabiir ah si aad tan u falanqeyso. Waxaad eegi doontaa shuruudaha xayeysiiskaaga ee booqdayaashu u adeegsanayaan inay ka helaan goobtaada. Miyay khuseeyaan waxaad iibinayso?
Asal ahaan, iibsadayaashu waxay gujiyaan ereyada raadinta ee xayeysiiska ku habboon waxa ay raadinayaan. Xaaladdan oo kale, haddii aad iibineyso "boorsooyinka maqaarka maqaarka ee haweenka", isticmaal ereyada raadinta iyo kala duwanaanshaha SEO ee u gaarka ah sheygaaga. Erey ku jira xayaysiiskaaga sida "boorsooyinka maqaarka ah" ama "bacaha dumarka" waa mid aad u ballaaran oo xoogaa marin habaabin ah. Markaad aqoonsatid ereyga saxda ah ee ku habboon xayeysiiskaaga, ku hayso cinwaankaaga URL ee xayeysiis kasta, cinwaanka ololaha iyo sharraxaadda. Natiijooyinka raadinta ayaa ku dhiirran doona ereyada muhiimka ah sidaas darteedna ka dhigaya mid muuqda.
Dhinac kale oo ololaha ka mid ah oo horseedi kara beddelaad xumo waa nooca wax soo saarka, tayada dalab iyo qiimaha aad bixiso. Haddii aad u ololeynayso alaabtaada ama adeeggaaga, ugu yaraan u samee cilmi-baaristaada si habboon si aad u ogaatid baahida macaamiishaada iyo waxa tartankaagu bixinayo. Hubso in badeecadaadu leedahay meel adag oo aad si cad ugu soo bandhigayso dalabkaaga. Sidoo kale, qiimuhu ha noqdo mid tartan ku xiran hadba waxa uu suuqa leeyahay.
Dhacdada 2aad: Websaydh Aan Fududayn
Markaad meesha ka saarto qodobka ololaha ama aad xalliso arrinta, dambiilahaaga xiga wuxuu noqon karaa websaydhka. Waxaa laga yaabaa in websaydhkaagu uu racfaan ku filan haysto. Si kastaba ha noqotee, sidee ayey waxtar u yihiin bogagga degitaanku? Ka waran naqshaddeeda, ma u habboon tahay adeegsadeheeda? Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad u fikirto sida macaamiil oo aad u falanqeyso dhinacyada soo socda ee boggaaga aragtidooda.
Design - Haddii aad markhaati ka tahay taraafikada sare ee aan u horseedin beddelaad, waxay u badan tahay dadku inay ku soo degayaan websaydhkaaga oo ay ku dhacayaan naxdin dhaqan. Xaqiiqdii way bixi doonaan! Weydii naftaada haddii naqshadeynta websaydhku ay la mid tahay isbeddellada hadda ka socda warshadahaaga. Maanta, tiknoolajiyada si dhakhso leh ayey u koraysa, dadkuna waxay caadeysteen waxyaabo casri ah. Xaaladdan oo kale, haysashada goob qallafsan oo aan waliba ahayn mid saaxiibtinimo moobiil ah waa wadar demin. U oggolow naqshadeyntaadu inay aragti sax ah ka dhiibato meheraddaada oo macaamiishaadu ay muddo dheer ku dhegi doonaan.
Contact Details - Macaamiisha, joogitaanka faahfaahinta xiriirka waxay calaamad u tahay in websaydhka ama ganacsigu yahay mid dhab ah oo lagu kalsoonaan karo. Tani waxay ka dhigeysaa lagama maarmaan in lagu daro sida nashqaddaada. Hubso in khadka taleefankaaga iyo emayllada aad dhiibto ay goobjoog yihiin. Sidan, haddii macaamiisha ay la soo xiriiraan waxaad jawaab ku heli kartaa waqti macquul ah gudahood. Waa inaad kudartaa cinwaanka jirka ee ganacsigaaga sidoo kale.
Bogagga soo dhicidda - Kani waa boggii ugu horreeyay ee martidaadu imaan doonaan isla marka ay gujiyaan xayeysiiskaaga. Xaaladdan oo kale, hubi inay ku habboon tahay wax kasta oo aad xayeysiineyso. Haddii aysan helin wixii ay filayeen, fursadaha ayaa ah inay iska tagayaan bogga. Tusaale ahaan, haddii ereyadaada muhiimka ahi ay yihiin "aaladda otomatiga emaylka," ha u oggolaadaan ereyadan inay horseed u noqdaan bog faahfaahin ka siinaya qalabkan. Sidoo kale, iska hubi in boggaga degitaankaagu si fudud u rartaan oo ay yihiin kuwo si fudud loo dhex mari karo.
Navigation - Sidee ugu fududahay macaamiisha inay ku dhex wareegaan bogagga kala duwan ee boggaaga. Macaamiil badan ayaa isla markiiba ka taga bog haddii ay ogaadaan inay waqti badan ku luminayaan helitaanka waxa ay raadinayaan. Xaaladdan oo kale, naqshadeyso websaydhkaaga sida dhammaan bogagga si fudud u furan. Sidoo kale, bogagga muhiimka ah sida kuwa muujinaya wax soo saarka iyo adeegyada, ee ku saabsan ganacsiga, xiriirada iyo wixii la mid ah waa inay muuqdaan oo si fudud loo heli karo.
Wicitaanka Wicitaanka - Wicitaanka waxqabadka waa albaab laga galo isdhexgal kasta oo dheeraad ah oo aad la yeelan karto macmiil mustaqbalka ah. Tani waxay muhiim ka dhigeysaa in la dhiso CTAs cad iyo badhanno caan ah oo isku mid ah. U oggolow xiriiriyeyaasha la bixiyay inay horseed u noqdaan tallaabada xigta ee aad rabto inay macaamiishaadu qaadaan.
Haddii aad rabto inaad hagaajiso wada hadalkaaga, maamul sumcaddaada ganacsi ee khadka tooska ah sidoo kale. Tani waa sababta oo ah macaamiisha waxay u badan tahay inay akhriyaan faallooyinka ama isbarbar dhigaan adeegyadaada iyo alaabadaada kuwa kale. Sababtaas awgeed, had iyo jeer bixi adeegyo caan ah laakiin u oggolow macaamiishaadu inay ka baxaan jawaab celin iyo marqaatiyaal sidoo kale. Kuwani waxay gacan ka geystaan ​​inay meheraddaada internetka ka dhigto mid umuuqata mid lagu kalsoonaan karo waxayna horumarin doontaa CTR-gaaga.
Tags: ctrsoo galidmarketing inboundboggaga soo degayaraadadhogaamiyayaal uqalmaqaabeynta bogga
Jamil waa maamulaha guud ee Iibinta Iswada oo Fudud, Wakaaladda Waxqabadka Iibka. Khibradiisa ku saabsan suuqgeynta, jabsiga koritaanka, jiilka hogaaminta iyo iibinta iyo otomatiga suuq geynta ayaa u tarjumaya aragti, qaabab wax ku ool ah oo loogu talagalay qaadashada iibka saqafka! Jamil wuxuu leeyahay khibrad 9 + sano ah sida hogaamiyaha suuq geynta kobaca heer sare heer caalami ah. Macaamiishiisa iyo sheekooyinka guusha koritaankooda waxaa lagu soo bandhigay Forbes, BBC, Tech Crunch iyo Venture Beat.
27, 2016 at 10: 50 AM
Maqaal wanaagsan Jamil, ku martiqaad waxyaabo badan oo aad ka fikirto.
Salaan ka timid Alicante, Spain.
Jan 18, 2017 saacadu markay ahayd 8:23 PM
Inta badan, macaamiisha waxay raadiyaan marka hore dib u eegista shirkadda ama jawaab celinta macaamiisha kale kahor intaanay sii wadi doonin inay yeeshaan ama ay xiiseeyaan inay ku eegaan bogagga kala duwan ee boggaaga. Waa muhiim in la maareeyo oo la hagaajiyo waqti ka waqti waxa ku jira, iyo muuqaalka iyo gaar ahaan wadahadalka iyo xiriirka aad la leedahay macaamiisha kala duwan. Ololayaasha iyo hogaaminta looma tixgelin doono wax soo saar haddii aad ficillo sameyneyso, laakiin aadan haysan soo celin ku habboon oo iib ah, marka waa muhiim in la maareeyo oo la helo labadaas.